Badhanka Iibsigu Miyuu Caawin Doonaa Warbaahinta Bulshada iyo ROI? | Martech Zone
Badhamada iibsiga ayaa ah isbeddelka cusub ee kulul ee warbaahinta bulshada, laakiin ma helayaan culeys badan. Xaqiiqdii, ah Invesp sahan ayaa lagu ogaaday in iibka ganacsiga bulshada uu ka kooban yahay kaliya 5% dakhliga tafaariiqda ee internetka sanadkii 2015. Baraha badan ee bulshada ayaa wali ku dhibtoonaya inay helaan kalsoonida macaamiisha, sidaa darteed barnaamijyada waxay u baahan doonaan inay caddeeyaan inay ka badan yihiin kaliya bulsho ahaan aqoon u leh inay ka guuleystaan.
Weli waan ku faraxsanahay caan ka ahaanshaha badhamada iibsiga bulshada waqtigan. Maaha inaanan iyaga hirgelin doonin - waxaan hubaa inay jiraan ROI togan oo gebi ahaanba fulin kasta ah. Qof baa, dabcan, gujinaya oo wax iibsanaya!
Waa aqoon guud in fure u ah kordhinta sicirka ku-beddelka khadka tooska ah ay tahay in la yareeyo tallaabooyinka loo baahan yahay si loogu beddelo. Iyadoo maskaxda lagu hayo, waa macquul kaliya in gelinta badhanka iibsiga aan xaddidneyn goor hore ee masafka iibsigu uu macno samaynayo. Laakiin taasi macquul maahan. Kicinta isbadalka ayaa gaabinaysa talaabooyinka laga qaaday go aanka wax gadashada ilaa loo badalo… dhibka jira ayaa ah in baraha bulshada aysan daruuri ahayn go aanka iibsiga.
Taasi ma isbadali doontaa? Waan hubaa inay sidaas noqon doonto. Maaddaama macaamiisha ay ku kalsoon yihiin boorsooyinkooda bulshada in badan sheekooyinka adeegga weynna ay bilaabaan inay suuqa galaan, waxay u badan tahay inay siyaabahan uga faa'iideysan doonaan. Si kastaba ha noqotee, si fudud uma arki karo bulsho ahaan dhexdhexaad dhexdhexaad ah weli. Aaminaaduna waa fure buuxda oo lagu guuleysto go'aanka iibsiga.
Midkoodna baraha bulshada malaha lambar aad wici karto markan oo aad dhibaato la kulanto (laga yaabee inay wax ku iibsadaan, ma hubo). Runtii ma waxaan rabaa inaan gujiyo iibsadaan oo aan amar u diro yaamayska, aniga oo ka yaaban haddii aan alaabtayda helayo, oo aan isweydiiyo xaggee taageero ka helayaa haddii aanan helin?
Pinterest waxay umuuqataa sida ugu dhow ee ku habboon barta bulshada markan maadaama inbadan oo dhagaystayaashoodu ay horey wax u iibsanayeen kanaallada Pinterest-na ay si dhow uga tarjumi karaan boggaga ama noocyada la dalacsiiyay.
Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah hirgelinta badhanka iibsiga bulshada
Badhanka iibsiga Facebook:
Badhanka Iibsiga Twitter:
Button Iibso Pinterest:
Badhanka Iibsiga ee Instagram:
Tags: dhacaiibso badhankaiibso facebookiibso instagraminvesppinterest iibsoiibso twitter